Taariikhda Horumarinta - Chengdu Action Electronics Joint-Stock Co., Ltd.
Qalabka Gaaska Gudaha
Qalabka Gubida Guriga
Gaaska Gudaha ee Solenoid Valve
Dhuumaha Gaaska Isku-xidhka Valve
Qalabka Gaaska La Qaadan Karo
Baadhista Gaaska Keliya ee la qaadi karo
Qalabka Gaaska Badan ee la qaadan karo
Baadhista Gaaska Leysarka Gacanta ee Gacanta
Qalabka digniinta Gaaska Warshadaha
Qalabka Gaaska Go'an
Qeylodhaan maqal-muuqaal ah oo aan qarxin karin
Guddiga Xakamaynta Alaarmiga Gaaska
Solenoid Valve ee warshadaha
Sanduuqa Isku xirka Valve Solenoid
Sanduuqa Xiriirinta Taageerada
Maxaad noo doorataa?
Nala daawo ficil ahaan!
Chengdu Action waxay ku takhasustay naqshadaynta madax-bannaan, R&D, wax-soo-saarka, iibinta iyo suuq-geynta gaaska, xalalka nidaamka ogaanshaha gaaska, xallinta nidaamka xakamaynta alaarmiga gaaska.Khadka alaabadu waxa uu daboolayaa in ka badan 30 nooc sida nidaamka xakamaynta gaaska, qalabka wax sheegta gaaska go'an ee warshadaha, gaaska gudaha iyo gaaska la qaadan karo.
Codsiyada waxaa ka mid ah batroolka, kiimikada, birta, macdanta, birta iyo birta, elektiroonigga, korontada, dawooyinka, cuntada, caafimaadka caafimaadka, beeraha, gaaska, LPG, taangiga Septic, sahayda biyaha iyo dheecaanka, kuleylka, injineernimada degmada, amniga guriga iyo caafimaadka, dadweynaha aagagga, daaweynta gaaska qashinka, daaweynta bulaacada, iyo warshado kale oo badan.Tiro ka mid ah badeecooyinka iyo tignoolajiyada ayaa helay shatiyada qaranka iyo xuquuqda daabacaada software, waxayna haystaan ​​ogolaanshaha CMC, CE, CNEX, NEPSI, HART iyo SIL2, iwm.
·Mar walba jidka ayaan ku jirnaa..
·Aqoon-is-weydaarsiga caadiga ah ee warshadaha 4.0 ee wax-soo-saarka sannadlaha ah ee 15 milyan ee cilmi-baarista dareemayaasha MEMS iyo mashaariicda horumarinta ayaa la geliyay wax-soo-saarka.
·Ku guuleystey 2018 Mudaaharaadka Ganacsiga Wadajirka ah ee Gobolka Sichuan; Wuxuu helay shahaadada xubinnimada Ururka Gaaska Sichuan.
·Waxa ay dhidibada u taagtay sanadguuradii 20-aad ee ka soo wareegtay aas aaskeeda oo ay qabatay dabbaaldeg halku dhigiisu ahaa "Badbaadada 20 Sano, Lagu Aaminay Tobaneeyo sano".
·Qalabka gaaska gaaska gaaska garaadka sumadda leh waxaa loo magacaabay badeecad caan ah oo ku taal Gobolka Sichuan oo ay bixisay Dowladda Gobolka Sichuan.
·Shirkadda waxaa loo magacaabay goob ka baxsan kambaska internship iyo saldhig tababar oo loogu talagalay machadyada tacliinta sare ee Gobolka Sichuan.
·Shirkaddu waxay heshay Shahaadada CMMI3; Waxaa loo aqoonsaday inay tahay xarun farsamo oo shirkadeed oo ku taal Chengdu.
·La helay 2014-kii Ganacsiga Farsamada Sare ee ugu Wanaagsan.
·Waxaa siisay China Resources Gas oo noqotay alaab-qeybiye u qalma.
·La Helay Shahaado Heerka-ll ah oo loogu talagalay Nakhshadeynta Injineerinka Dabka iyo Dhismaha; Chengdu Gas Detection Engineering Techology Research Centre waxaa loo taxaabay sidii xarun cilmi baaris tignoolajiyada heerka-degmo.
·Shirkaddu waxay noqotay mid ka mid ah tobanka shirkadood ee ugu wanaagsan IoT ee Chengdu; Waxaa siisay gelitaanka CNOOC waxayna noqotay alaab-qeybiye u qalma.
·Wuxuu noqday maamule Chengdu IoT Alliance;Waxaa siisay ENN oo noqday alaab-qeybiye xaq u leh.
·Wuxuu noqday alaab-qeybiye u qalma Website-ka Wax-soo-iibsiga Gaaska Shiinaha (dib-u-habaynta saami-qaybsigeeda waa la dhammaystiray waxaana shirkadda loo beddelay Chengdu Action Electronics Joint-Stock Co., Ltd isla sanadkaas).
·Shirkadda waxaa loo aqoonsaday inay tahay shirkad hi-tech ah oo heer qaran ah.
·Ku guuleystey Abaalmarinta Horumarinta Sayniska iyo Tignoolajiyada wuxuuna helay Shahaadada Shirkadaha AAA-Credit ee Shiinaha;Shirkadda waxaa loo oggolaaday inay gasho SINOPEC iyo Website Energy Ahead oo ay noqoto alaab-qeybiye xaq u leh.
·Shirkaddu waxay ku gudubtay shahaadada ganacsiga software iyo software waxaana lagu qiimeeyay "canshuur bixiye weyn" Aagga Hi-tech, Chengdu.
·Shirkadda waxaa lagu qiimeeyay inay tahay "shirkad la aamini karo oo xoogga saaraysa tayada iyo u hoggaansanaanta shuruucda" Xarunta Macluumaadka Tayada iyo Kormeerka Farsamada ee Sichuan.
·Shirkadda waxa maalgelisay Sanduuqa Hal-abuurka Qaranka.
·Shirkadda waxaa lagu qiimeeyay inay tahay shirkad hi-tech ah Waaxda Sayniska iyo Tignoolajiyada ee Gobolka Sichuan.
·Shirkaddu waxay noqotay shirkaddii ugu horreysay ee Koonfur-galbeed ee Shiinaha oo ku gudubta kormeerka xaaladda warshadda si loo oggolaado nooca.Badeecooyin cusub ayaa la ogaaday in la aqbali karo markii la baaray.
·Shirkadu waxay ka heshay Shahaadada Kormeerka ee Shiinaha ee Kormeerka Qaranka iyo Xarunta Imtixaanka Tayada Alaabta Elektrooniga ah waxaana alaabooyinka laga iibiyay Beijing.
Alaarmiga gaaska gubanaya, Shiine gaaska baadhe, gaaska ololi kara, lpg gaaska ogaanshaha, qalabka gaaska go'an, qalabka gaaska,
Wixii su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan noogu dhaaf emailkaaga waxaanan kula xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
No.88, West Wulian Street, IOT Park, Shuangliu Southwest Airport Aagga Horumarinta Dhaqaalaha, Chengdu, Shiinaha
Xalka Gaaska Shidaalka
Xalka Gaaska Warshadaha
Xallinta Qaylo-dhaanta Gaaska Utility Tunnel
Ciidda Amniga Sirdoonka
© Xuquuqda daabacaadda 20112022: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.
Soo dir email